ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Quanzhou Youhottest Garment Co. , Ltd.
Quanzhou Youhottest Garment Co. , Ltd. သည်ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၊၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Clothes.Now ၏အရင်းအနှီးထုတ်လုပ်မှုwhichရိယာဖြစ်သော Quanzhou City China တွင်တည်ရှိသည် 10,000တစ်လထုတ်လုပ်မှု PCs ။ ၎င်း၏တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ထိရောက်သောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်ပြည်မှအကျော်ကြားဆုံး sleepwear သို့မဟုတ်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူကြိုက်များသောအမှတ်တံဆိပ်များအတွက် OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။Sexy Lingerie၊ ပိုးအိမ်အ ၀ တ်အစား၊ အမျိုးသမီးဝတ်နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောဒီဇိုင်းများကို ၁၀ နှစ်ကျော်အာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများသည်ကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောသေဆုံးသည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောပုံနှိပ်ကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဖောက်သည်တို့၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။သင်၏လည်ပတ်မှုကိုနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
•မြင့်မားသော splicing အရည်အသွေးနှင့်သပ်ရပ်မထိုက်မတန်
•သင်၏လိုအပ်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများနှင့်လိုအပ်ချက်များအရအမျိုးသမီးညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုတစ်ခုစီကို ပို၍ တိတိကျကျသတ်မှတ်နိုင်သည်
1. တစ်ခုချင်းစီကိုအဘို့အ minimun အမိန့်အရေအတွက်ကဘာလဲ?
ကြိုတင်မှာယူမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်မပါ ၀ င်ပါ။ ရောနှောထားသောစတိုင်လ်များရနိုင်သည်၊ သင်စတိုင်တစ်ခုစီအတွက်ဝတ်စုံ ၁ ခုမှာယူနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၅၀ သာရနိုင်သည်။
၂။ ထိရောက်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကိုသက်သာအောင်၊ မြန်ပြီးမြန်ရန်အမြဲအကြံပြုပါသည်။ သေးငယ်သောအမှာစာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးယာဉ် (DHL, EMS, TNT, UPS, DPEX, Aramex) ကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ သင်၏ပမာဏကြီးမားပါကလေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
သင်၏ပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး၊ သင်၏ကြိုတင်မှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းကိုထုပ်ပိုးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း manll ပမာဏ (စတော့ရှယ်ယာပစ္စည်းများ) အတွက်သင်၏ရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအတည်ပြုပြီးပါလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရမည့်အချိန်သည်သင်နေထိုင်သောတိုင်းပြည်အပေါ်မူတည်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ၃-၁၀ ရက်အတွင်းရောက်ရှိလိမ့်မည်။ OEM / ODM မောင်းနှင်သူများအတွက်အချိန်သည်သင်၏အော်ဒါမှာယူမှုအသေးစိတ်ပေါ်မူတည်သည်။ သင့်အမှာစာအားအတည်မပြုမီသင့်အားခန့်မှန်းအချိန်ကိုအကြောင်းကြားပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်ရာခိုင်နှုန်းကိုသက်သေပြပြီးဖြစ်သောအရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများက instoce လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ 24 နာရီအတွင်း pattem လုပ်နိုင်ပါတယ်